Banijya News | अपजसे देउवा, पाँचै पटक देशको बागडोर समाल्दै - Banijya News अपजसे देउवा, पाँचै पटक देशको बागडोर समाल्दै - Banijya News
अपजसे देउवा, पाँचै पटक देशको बागडोर समाल्दै
काठमाडौं ः विस. २००३ जेठ महिनामा डडेलधुरा जिल्लाको असीग्राममा जन्मिएका हुन् शेरबहादुर देउवा । आफू जम्मिएकै गाउँमा रहेको असीग्राम प्राथमिक विद्यालयमा प्राथमिक शिक्षा र महेन्द्र माविमा निम्न माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका देउवात्यसपछिको अध्यानको लागि भने डोटीको उच्चकोटमा रहेको सीताराम माविमा पुगेका थिए । स्कुले जीवनबाट नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा झुकाव राख्ने देउवा उच्च शिक्षाको लागि भने काठमाडौं आएका हुन् ।
विस. २०२१ सालमा काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका देउवा त्यहीबाट नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय भए । गाउँमाहुँदा निडर केटोको छाबी बनाएका देउवा त्रिचन्द्रमा पनि निडरकै रुपमा रहे । विद्यार्थीको लागि पटक पटक उनको प्रध्यापकसँग झगडा हुने गरेको थियो । कलेजमा रहँदा थुप्रै पटक प्रध्यापकले उनलाई अर्काको लागि भन्दापनि आफ्नो लागि काम गर्न सुझाव दिने गरेका थिए । तर, अन्यायका विरुद्ध वकालत गर्नपछि नपर्ने देउवा आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको हितको लागि लड्न थाले । यही समय देउवाले आफ्नो जीबन नै जगतको हितको लागि सुम्पने निधो गरिसकेका थिए । परिमाण नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गएका थिए । शुरुमा उनको इच्छा थियो विद्यार्थी संघको सभापतिमा निर्वाचित हुने् । नभन्दै उनी विसं २०२८ सालमा पहिलो पटक नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिमा विजयी भए । जब उनी सभापतिमा बिजय भए, तव उनले आफ्नो राजनीतिलाई झन् सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन थाले । नेविसंघको राजतीनिबाट माउपाटी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा होमिन थाले ।
त्यस्ताका उनको संम्पर्क क्रान्तिका महानायक बीपी कोइरालासँग भयो । पहिलो भेटमा नै देउवासित बीपी मोहित भए, यस्को कारण थियो देउवामा भएको निडरपन अनी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता । विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाएका देउवालाई बीपीलेसमेत जिम्मेवारी सुम्पने निधो गर्दे सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएर पठाए । देशमा पञ्चेहरुको बिगबिगी रहेको समय देशमा उनीहरुको विरुदमा आन्दोलन गर्नु रहज थिएन् । ‘यस्को नेतृत्वमा क्रान्ती चन्दैछ’ भन्ने पञ्चेहरुको थाहा पाउने साथ घाटीसम्म पुगेर उनीहरुले छोडने गरेका थिए । यही अवस्थामा पुरिएकाको खाना नपाएर मृत्यु हुनेगरको थियो ।
समय यती जटिल थियो कि, काठमाडौबाट सिधै डडेलधुरा पुग्न समेत कठिन अवस्था थियो । ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाया भनेझैं’ देउवाले पनि नयाँ विकल्प खोजे । भारतको बाटो हुँदै उनी डडेलधुरा पुगे । भारतको बाटो हुँदै दार्चुला, बैंतडीमा समेत क्रान्तीको बीउ रोप्दै पुगेक देउवाको दिनचर्या सूदरपश्चिममा आन्दोनलको विगुल फैलाउनु थियो । यसरी संघर्षमा होमिएका देउवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक गरी नौ वर्ष जेल जीवन बिताएका छन् । उनी २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री बनेको पाँच वर्षभित्रै मुलुकको प्रधानमन्त्री बने सौभाग्य उनलाई प्राप्त भयो ।
राजनीतिको धेरै उतार चढाव खेप्नु परेका देउवाले कांग्रेसभित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा काग्रेसका सस्थापन नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको विश्वास पात्रका रुपमा काम गरेका छन् ।
कोइरालाले अघि बढाएका देउवाले पार्टीको दशौ पोखरा महाधिवेशनमा कोइरालालाई नै नेतृत्वका लागि चुनौती दिएका थिए । २०५७ सालमा पोखरा महाधिवेशनमा देउवा कोइरालाकै विरुद्धमा सभापतिमा पदमा उम्मेदवारी दिँदा हार व्यहोर्नुप¥यो ।
देशमा माओवादी जनयुद्धले पकड जमाइ सकेको थियो। कांग्रेसमा राजा र सेनाको असहयोग पनि बढ्दै गएको थियो भने एमालेले ५७ दिनसम्मको संसद घेराउ गरेको थियो जसबाट बाध्य भएर पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ असार राजिनामा दिनुपरेको थियो । यसपछि फेरि कांग्रेसको नेतृत्व देउवाकै पक्षमा आयो र पुन कांग्रेस संसदीय दलको उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई हराएर नेता बने । संसदमा पार्टीको बहुमत भएकाले उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।
राजनीतिक घटनासँगसँगै विंस २०६१ साल माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कू’ मार्फत देउवालाई दोस्रोपटक हटाइदिएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीलाई साथ लिएर ज्ञानेन्द्र विरुद्ध जनान्दोलनको तयारीमा जुटे । संसद पुनः स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद पुर्न एक पटक नेपाली राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा आए । यसपछि देउवा कोइरालासँग पार्टी एकीकरण गरेर मूल पार्टीमै फर्किए ।
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा झण्डै पाँच दशकविताएपछि वि.सं. २०७२ सालको तेह्रौँ महाधिवेशनमा मात्र पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई हराएर देउवा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा बने । जब देउवा पाटि सभापति बने त्यसयता नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देउवा नै छन् । जस्ले जे भनेपनि उनी यतिखेर नेपाली राजनीतिको केन्द्रका पात्र पनि देउवा नै हुन् ।देउवा आज यो फेरि यो मुलुकमा पाँचै पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।